စက်နဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လို့ရပြီလား – Healthy Life Journal
မေး. ကျွန်မက သမီးလေးကိုခွဲမွေးထားတာ သုံးလရှိပါပြီ။ ဗိုက်ကပူနေလို့ စက်ကလေးနဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ချင်လို့ပါ၊ လုပ်လို့ရပြီလား။ ဘာလုပ်ရင် ဗိုက်ချပ်မလဲလို့ အကြံပေးပါဦး။
ချစ်စံအိမ် ချစ်စံအိမ် (FB)
ဖြေ. မီးဖွားပြီးချိန် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရာမှာ ကျန်းမာရေးအခြေအနေ၊ ကိုယ်ခန္ဓာသန်စွမ်းမှု အားကစားနည်း၊ အသက်အရွယ်စတာတွေကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါတယ်။ သာမန်အားဖြင့် ဗိုက်ခွဲမွေးပြီး ၆ပတ်ကျော်ရင် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်နိုင်ပြီး ၁၂ ပတ်ကျော်ရင် ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းတွေ လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ကလေးမွေးပြီး လုပ်ငန်းခွင်သို့ ပြန်ဝင်မည်ဆိုလျှင်
ကိုယ်ဝန် ၆ လနှင့် မွေးဖွားခဲ့ရသော အမြွှာကလေးငယ်နှစ်ဦးလုံး ကျန်းမာလျက်ရှိ